မြင့်မားတဲ့အဆုံး pc ပေါ်မှာအနိမျ့ fps
မေးခွန်း မြင့်မားတဲ့အဆုံး pc ပေါ်မှာအနိမျ့ fps
2 နှစ်ပေါင်း3months ago -2နှစ်ပေါင်း3months ago #621 by JanneAir15
ဟယ်လို! ကိုယ့်ကိုမကြာသေးမီကအသစ်တခုကွန်ပျူတာ built နှင့် installed FSX။ ကျွန်မအခုလျော့နည်း addons တို (ဟောင်းကွန်ပျူတာအများအပြားအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ addons ရှိ၏) သော်လည်းငါ့ fps ပင် (20fps န်းကျင်) တစ်ဦးအတော်လေးကောင်းသောကွန်ပျူတာနှင့်အတူဒါအနိမ့်သည်အဘယ်ကြောင့်ငါတွေးမိ။ သင်ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား?
CPU ကို: AMD ၏ Ryzen 1700X (overclocked မဟုတ်)
GPU ကို: NVIDIA GeForce GTX 1070
ရမ်:, G ကျွမ်းကျင်မှု Ripjaws V ကိုစီးရီး 16GB DDR4 3200MHz
motherboard: ASUS ကချုပ် X370 Pro ကို
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း3months ago နေဖြင့် JanneAir15.
2 နှစ်ပေါင်း3months ago #623 by Gh0stRider203
သငျသညျလုပျနိုငျအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်။ ကျွန်မဝမ်းနည်းစွာ, သုံးစွဲဖို့အသုံးပြု #1 site ကိုလှည့်ပတ်ခြင်းမရှိတော့ဖြစ်ပါသည်
ငါပွုင့်ပထမဦးဆုံးအရာ, ရိုးရိုးသားသား, အ UIAutomationCore.dll ဖိုင်ကိုအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ငါကနေကျွန်မရဲ့အစားထိုးဖိုင်တယ်ဘယ်မှာငါတောင်မအောက်မေ့ကြပါဘူး။
2 နှစ်ပေါင်း3months ago #624 by JanneAir15
ငါပြီးသားကြောင်း UIAutomationCore ရှိသည်။ DLL ဒါပေမဲ့ရေနွေးငွေ့ဖိုရမ်အတွက်အစွန်အဖျားကွိုးစားနိုင်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဖျက်ပစ်စကားမစပ် fsx.cfg ငါကမြှဖူးပေမယ့်ယခုငါပဲအပြောင်းအလဲတချို့ကိုထည့်သွင်းကြောင့်အခုအချိန်မှာပြီးသားနည်းနည်းပိုကောင်းမယ့်လို့ပဲ။
2 နှစ်ပေါင်း3months ago #625 by JanneAir15
က Fixed! ကိုယ့်ကိုယ်ကနေဆဲငါမပြုမီခဲ့ setting တွင်ထက်ပိုကောင်းကြည့်အချို့ခြင်းလျှောဆင်းထားခဲ့ဘူးပင်လျှောခြင်းနှင့်အကြားအကောင်းတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါရီရတယ်
2 နှစ်ပေါင်း3months ago #629 by Gh0stRider203
0.530 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်